AirCover: Izinga lokhuseleko labahambi elingenakuthelekiswa nanto
Eyona inshorensi yohambo equka yonke into.
Isoloko iqukiwe ibe isoloko isimahla.
Kwimeko engafane yenzeke yokuba Umbuki Zindwendwe kufuneke arhoxise ukubhukisha kwakho kwiintsuku eziyi-30 ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa, siza kukukhangelela indawo efanayo okanye ebhetele, okanye sikubuyisele imali yakho.
Ukuba awukwazi ukubhalisa xa ufika kwindawo yakho ibe Umbuki Zindwendwe akakwazi ukuyilungisa loo ngxaki, siza kukukhangelela indawo efanayo okanye ebhetele yexesha elilingana nelo ubuza kulihlala kwindawo yokuqala okanye sikubuyisele imali yakho.
Ukuba nanini na usekuloo ndawo ufumanisa ukuba ayifani nale ibiveziwe—umz., ifriji ayisebenzi ibe Umbuki Zindwendwe wakho akakwazi kuyilungisa ngokukhawuleza okanye amagumbi okulala ambalwa—uza kuba neentsuku ezintathu zokusixelela ibe siza kukukhangelela indawo efanayo okanye ebhetele, okanye sikubuyisele imali yakho.
Ukuba nanini na uziva ungakhuselekanga, uza kufumana uncedo olukhawulezileyo kubantu abaqeqeshwe ngokukhethekileyo, imini nobusuku.
Fumana iinkcukacha ezipheleleyo zendlela iAirCover ekhusela ngayo ukubhukisha kwakho kunye nayo nayiphi na into engaqukwanga.
NguAirbnb kuphela okunika iAirCover
Ukubhukisha ngakunye kuba neAirCover
Indawo eyakhiwe ngobuchule iba neAirCover
Buka iindawo ezakhiwe ngobuchule
Inqaba nganye iba neAirCover
Indawo esentlango nganye iba neAirCover
Buka iindawo ezisentlango
Indawo nganye ekwiArctic iba neAirCover
Buka iindawo ezikwiArctic
Zonke iindawo ezingaselwandle zineAirCover
Buka iindawo ezingaselwandle
Awuyifumani le nto uyifunayo? Yiya Kwiziko lethu Loncedo
Isebenza njani iAirCover?
Zikhona iingxaki ezingakhuselwanga yiAirCover?
Ngaba ndiyakhuselwa yiAirCover ukuba uhambo lwam luchatshzelwa yiCOVID-19?
Ndingumbuki Zindwendwe. Ngaba ndikhuselwe?
Kukho neAirCover Yababuki Zindwendwe
Ngaba unomdla wokubuka iindwendwe? NgeAirCover Yababuki Zindwendwe, unokuziva uzithembile ukuba ungaqalisa.
Funda ngokubuka iindwendwe